Sheekada Said - Telling the Real Story
Saciid wuxu ku riyoonayay inuu aado Yurub. Wuxuu rabay inuu halkaas ka sii shaqeeyo sidii ganacsade ah oo uu dib ugu laabto dalkiisa isagoo ka caawinaya waddankiisa. Qaar badan oo ka mid ah asxaabtiisa waxay u safreen Yurub waxayna u sheegeen sida nolosha cajiibka ahi ay ujirto.
Saciid wuxuu la xiriiray nin wax tahriibiya waxaana loo qaaday Yemen doon. Waxay ahayd isgoys duufaya oo markuu yimid, wuxuu ku helay gacantiisa tahriibiyeyaal naxariis daran oo dadka ula dhaqma sidii adoomo oo kale. Waxaa lagu haystay maxbuus laba bilood ka hor intuusan safarka sii wadin. Ka dib wuxuu mar kale ka gudbey badda, oo uu aado Suudaan, halkaas oo lagu dul dhigay gaari xamuul ah oo ay la socdaan kuwa kale oo badan. Waxaa loo qaaday cidlada dhanka Liibiya. Dirawalku wuxuu ahaa habeen-qaboob, kuleylka ayaa ahaa mid aan loo dulqaadan karin. Haddii qof dhaco oo uu ka dhaco gaariga, ma joojin doonaan inay soo qaadaan.
Liibiya, Saciid waxaa lagu qasbay inuu u yeero ehelkiisa oo u sheego in la haysto isagoo ay waajib tahay inuu bixiyo madaxfurasho dhan $10,000. Qoyskiisu waa faqiir waxayna ahayd inay iibiyaan hantidooda si loo sii daayo.
Ugu dambeyntiina, Saciid wuxuu awooday inuu raaco dooni tahriibiyayaal Yurub. Waxay ahayd doon yar oo la qaadi karo waxayna wadeen 18 saacadood iyagoon dareemin jihada. Ugu dambeyntiina, waxaa soo qaaday Ciidanka Ilaalada Xeebaha Liibiya oo xabsiga loo taxaabay. Shuruudo aad u xun ayaa jiray, oo markii Saciid fursad loo siiyay in la celiyo, wuxuu ku faraxsanaa aqbalay. Wuxuu ku soo noqday Soomaaliya isagoo gacan la'aan ah kadib safar xun. Wuxuu dareemay xishood sababta oo ah waxyeelada uu u gaystay qoyskiisa.